DHEGEYSO: Dadka Ingiriiska ah oo kusoo qamaamay qaadashada Baasaboorka Sweden (Tirko rikoodh jebis ah) | Hadalsame Media
Xaftar oo laga qabsaday Garoonka Dayuuradaha Tripoli & toban aag oo…
DAAWO: Adeeg durba waxtarkiisa la dareemay oo kusoo kordhay magaalada Muqdisho
RASMI: DF oo dib u fasaxday duullimaadyadii gudaha & dibedda (Taariikhda…
Turkiga oo ka dhex kalluumaysanaya Maraykanka & Shiinaha (Hindise uusan Shiinuhu…
Qarax ay maalin hore dad rayid ihi ku baaba’een oo la…
Somalia: Democracy in transition
The bodies of 8 young Somali men were dumped near Balcad
Turkish Airlines oo shaacisay taariikhda ay dib u bilaabayso duullimaadyada dalal…
Booliis & burcad Koonfur Afrikaan ah oo waxyeello u gaystey rag…
Nin caddaan ah oo bambooyin u qaybinaya dibedbaxayaasha oo la qabtay…
Saacadaha, maalmaha & taariikhaha la dheelayo kulamada harsan ee Serie A…
AC Milan oo €110milyan oo euro ku raadinaysa 5 laacib oo…
XIRIIR XAARAAN AH: Qarreen sheegay inay baarayaan xiriirka ka dhexeeya Juventus,…
Kooxda Liverpool oo qandaraaska u kordhisey laacib Soomaaliyeed oo hibo kubadeed…
4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan…
CAASIMADDII CAABUQA: Magaaladii uu kasoo bilowday Covid-19 oo laga waayey hal…
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Dadka Ingiriiska ah oo kusoo qamaamay qaadashada Baasaboorka Sweden (Tirko rikoodh...
DHEGEYSO: Dadka Ingiriiska ah oo kusoo qamaamay qaadashada Baasaboorka Sweden (Tirko rikoodh jebis ah)
(Stockholm) 07 Nof 2019 – Tiradda muwaadiniinta Ingiriiska ee loo oggolaaday dhalashada Sweden ayaa gaartay rikoodh cusub. Sannadkan gudihiisa 4 100 muwaadiniin Ingiriis ah ayaa qaadatay dhalashada Sweden.
– Waa dareen qurux badan marka aad booliska ka soo qaadato baasaboorka, waraaqadaha caddeyntana aad ka hesho hay’adda canshuurta, ayuu yiri Daniel Reed oo u dhashay dalka Ingiriiska balse ku noolaa Sweden shan sannadood isaga oo qaatay dhalashada Sweden bishii Maarso.
Daniel Reed ayaa intaasi raaciyay in imminka uu dareemayo xasilooni iyo nabadgelyo maadaama uu og yahay in uu sii joogi karo Sweden.
Sweden waxaa ku nool ilaa iyo 30 kun oo qof oo u dhalashay dalka Ingiriiska. waxaa sannad walba sii kordheysa tiradda dalbaneysa dhalashada Sweden tan iyo markii ay dhacday aftidii ay Ingiriisku ugu codeeyeen in ay isaga baxayaan Midowga Yurub. Tirada loo oggolaaday dhalshada Sweden ayaa saddex jibaarantay sannad gudihiisa, iyada oo ay ku soo korortay 1400 qof sannadkii hore oo ay soo gaartay 4100 qof sannadkan.
Jonas Colling waa isu duwaha hay’adda socdaalka ee arrimaha Brexit.
– Tan iyo isbedelka sannadka, waxaan ahmiyada siinay dhalashada. Waxaan abuurnay waax cusub halkaasi oo aan labo jibaarnay awoodeena maareenta codsiyada dhalashada.
Inkastoo tirada go’aan gaarista codsiyada dalabyada dhalashada dadka Ingiriiska ay imminka badan tahay, misanana sarkaalka ka tirsan waaxda socdaalka Jonas Colling, waxuu leeyahay hay’addu ahmiyad ahaan ma ka horumariso dadka Ingiriiska muwaadiniinta kale ee u dhashay dalalka ee iyaguna soo codada dhalashada.
– Weli si rasmi ah uma dhicin brexit sidaasi darteed ma heysano sharci ahmiyada koowaad ku siineyn karno dadka Ingiriiska u dhashay sidaasi daraadeed waxaan kiisaska u kala saarnaa sida ugu dhaqsiyaha badan si aan go’aan ugu gaarno. Codsiyada qaar waa dhammeystiran yihiin, qaarna baaritaan dheeri ah ayay u baahan yihiin. Codsiyo badan oo kuwa Ingiriiska ah ayaa dhammeytirnaa sidaasi ayaana dedejisay in go’aano laga gaaro, ayuu yiri Jonas Colling.
Daniel Reed ayaa sida inta badan ee kale waxuu isla heysan doonaan labada dhalasho iyo baasaboor balse dhammaadka toddobaadkan ayaa markiisa ugu horreysa waxuu ku safri doonaan baasboorkiisa Swedish ka.
– Waan heysanaa labadda dhalasho. Haddaba waxaan aadi karaa meesha an ka doono caalamka. Dubai ayaan u socdaali doonaa Sabtiga, waana arki doonaa inta ay socon doonto, ayuu yiri, säger Daniel Reed.
Xigasho: Raadiyaha Sweden
Previous articleDHEGEYSO: ”Waxaa caddaatay inaysan jirin Puntland la wada leeyahay!” – Guddoomiye Dhoobo-daareed oo ka hadlay tillaabada xigta
Next articleDAAWO: ”Tira-koobka Kenya wuxuu sheegay in reer Mandheera ay 25% dhinteen!” – Siyaasiyiin Soomaalida iyo Kenyan ah oo isku helay Twitter-ka!
Xaftar oo laga qabsaday Garoonka Dayuuradaha Tripoli & toban aag oo kale + Sawirro
RASMI: DF oo dib u fasaxday duullimaadyadii gudaha & dibedda (Taariikhda la bilaabayo)
hadalsame - June 1, 2020
(Berbera) 01 June 2020 - Asphalt paved Berbera-Hargeisa road has been re-opened by President of Somaliland, Mr. Bihi Bihi. The new modern road is important...
hadalsame - June 3, 2020
(Tripoli) 03 Juun 2020 - Ciidamada Libya ee GNA ayaa si buuxda ula wareegey Gegada Caalamiga ah ee Tripoli International Airport kaddib markii ay...
Turkiga oo ka dhex kalluumaysanaya Maraykanka & Shiinaha (Hindise uusan Shiinuhu jeclaan doonin oo uu keenay)
Qarax ay maalin hore dad rayid ihi ku baaba’een oo la ogaadey inaysan ka dambayn kooxda Shabaabku
Booliiska Maraykanku hal sano ayay 600 dileen, waxaase jira dal caan ah oo aysan Booliiskiisu hal qof dilin muddo 10 sano ah
hadalsame - June 2, 2020
(Hadalsame) 02 Juun 2020 - Xilli ay Maraykanka ka holcayaan mudaaharaadyo ka dhashay dilkii loo gaystey George Floyd, dalka Norway ayaanba inta badan wax...
SAWIRRO: Kooxo Shiico ah oo burburisey qabrigii Khaliifkii Cumar Ibn Cabdul Casiis (Wax ka baro qofka uu ahaa)